भीम रावलको राजीनाम पछि एमालेमा आएको नयाँ तरङ्ग -
भीम रावलको राजीनाम पछि एमालेमा आएको नयाँ तरङ्ग
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार १७:३७
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनका निम्ति गरिएको १० बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि त्यस समितिबाट राजीनामा दिएसँगै एमालेमा थप जटिलता सिर्जना भएको छ । पार्टी नेतृत्वको तानाशाही प्रवृतिविरुद्ध उत्रिन नसकेका नेता कार्याकर्ताहरु रावलको कदमपछि थप सशक्त बनेका छन् । एमाले नेताहरुले पार्टीलाई एकीकृत गर्नका लागि पार्टी अध्यक्षले सबैको कुरा शीरोधार्य गनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यता, नेता रावलले आफूले सहमति गर्न खोज्दा ओलीले मार्ग प्रशस्त नगरेको र १० बुँदे कार्यान्वयनका नाममा नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने रावलले कार्यदलमा का मगर्न नसकेर राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।रावललाई पार्टीका पेलान भएपछि उनी निकट नेताहरु पनि थप सक्रिय भएका छन् । ओलीलाई सवक सिकाउन भन्दै रावललाई भेट्ने क्रम जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
भीम रावलले पनि अपमान सहन नसकिने भन्दै केही नयाँ घोषणाको तयारी गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनका निम्ति गरिएको १० बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि त्यस समितिबाट राजीनामा दिएसँगै एमालेमा थप जटिलता सिर्जना भएको छ ।
पार्टी नेतृत्वको तानाशाही प्रवृतिविरुद्ध उत्रिन नसकेका नेता कार्याकर्ताहरु रावलको कदमपछि थप सशक्त बनेका छन् । एमाले नेताहरुले पार्टीलाई एकीकृत गर्नका लागि पार्टी अध्यक्षले सबैको कुरा शीरोधार्य गनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।यता, नेता रावलले आफूले सहमति गर्न खोज्दा ओलीले मार्ग प्रशस्त नगरेको र १० बुँदे कार्यान्वयनका नाममा नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने रावलले कार्यदलमा का मगर्न नसकेर राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।
रावललाई पार्टीका पेलान भएपछि उनी निकट नेताहरु पनि थप सक्रिय भएका छन् । ओलीलाई सवक सिकाउन भन्दै रावललाई भेट्ने क्रम जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । भीम रावलले पनि अपमान सहन नसकिने भन्दै केही नयाँ घोषणाको तयारी गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्
Tags: Bhim rawal, communista party, sher bd deuba. primenister of nepal sher badhur dewuba
कोरोना प्रभावितलाई सरकारले रु. एक अर्ब बराबरको कर्जा उपलब्ध गराउने
६६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि